News 18 Nepal || ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? यसरी घरमै गर्नुहोस् उपचार
ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? यसरी घरमै गर्नुहोस् उपचार
काठमाडौं । हामीले खाने खानाले नै जीवन चलिरहेको छ । खानामा हुने तत्वले गर्दा हाम्रो शरीरले शक्ति पाउँछ । तर, कहिलेकाहीँ हामीले स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी खाना खाइरहेका हुन्छौं । यस बारेमा थाहा पनि पाएका हुँदैनौं । यस्तो खानाले खास गरी पेटमा समस्या निम्त्याउने गर्छ ।
तर, पेट सफा गर्न पनि सकिन्छ । पेट सफा गर्नका लागि खाना खाइसकेपछि मेथी, ज्वानो र बिरेनुन मिसाएर खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ । यी तीन चीज खाँदा पेटमा ग्यास बन्न पाउँदैन । त्यस्तै तपाईंले एक पोटी लसुन र किसमिस खानाले पनि पेट स्वस्थ राख्न सकिन्छ ।
लसुन किसमिसले पेटमा जम्मा भएको खराब हावालाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ । यति मात्र होइन, अदुवाको टुक्रामा नुन छर्किएर खाँदा पनि पेटलाई फाइदा पुग्छ । दिनमा ३ पटक अदुवा र नुन खाँदा ग्यास्ट्रिक पनि निको हुन्छ । साथै समयमा भोक पनि लाग्छ ।
यदि तपाईंसँग ज्वानो र नुन छ भने यी दुईलाई मिलाएर खाँदा पेटमा हुने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । साथै ग्यास्ट्रिकबाट पनि जोगिन सकिन्छ ।
‘जाडोमा कोरोना बढ्छ, माघसम्म अत्यन्तै सतर्क बनौं’
रातारात बढ्ने होइन शरीरमा इम्युनिटी, अपनाउनुहोस यस्तो विधी
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट जोगिन डा. पाण्डेले दिए यस्ता सुझाव
‘लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खोलेर जनजीवन सुचारु गरौँ’
यी सात खानेकुरा जसले घटाउँछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
कोरोना संक्रमण बारे बेलायतका वैज्ञानिकले पत्ता लगाए नयाँ लक्षण
लकडाउन तथा निषेधाज्ञामा पनि कोरोना संक्रमण किन बढिरहेको छ ?
इम्युनिटी पावर बढाउन कति घण्टा सुत्ने ? यसो भन्छन् डा. पाण्डे